Cuntooyinkaan waa ka-reebitaan bogga EatFresh.org. Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahad naqno EatFresh.org si aan u siino ogolaansho aan kula wadaagno cuntadaas. Eatfresh.org waa mashruuc ka mid ah dukaanka Leah iyo Hay'adda Adeegyada Aadanaha ee Magaalada iyo Degmada San Francisco. Xayawaanka Leah waxay maamushaa horumarinta iyo dayactirka qalabka EatFresh.org, waxayna bixisaa taageero lamaane ah oo lagu fulinayo qalabka California.
Ka daawo fiidyawaan YouTube
Fiiri fiidiyooga si dhakhso ah fiidiyoow loogu talagalay feejignaanta muuqaalka ee EatFresh.org
EatFresh.org waa mid ka mid ah moobiilka USDA-la ansixiyey oo bixinaya waxyaabo iyo qalab loogu talagalay dadweynaha CalFresh iyo ururrada u adeega. Waxay leedahay mid sahlan, qiimo jaban cuntada; roodhida cuntada "qorshayaasha cuntada" si loo yareeyo qashinka cuntada; talooyin caafimaad; macluumaadka helitaanka cuntada; iyo Weydii Dietitian. Boggaan waxaa laga helaa Ingiriis, Isbaanish, iyo Shiineys.
Himilooyinka EatFresh.org waa:
Si aad ugu dhiirigeliso cunto kariska guriga leh cuntooyinka cusub iyo kuwa yar yar ee la farsameeyo kuwa aan la cuni karin.
Si aad u muujiso dadka isticmaala in isbeddel caafimaad leh ay dhacaan inkastoo caqabado jira.
Si aad si fiican u fahamto xiriirka u dhaxeeya qaab nololeedka / doorashooyinka cuntada leh kahortaga cudurka dabadheeraad ah.
EatFresh.org waxaa sidoo kale ku jira koorsada EatFresh.org Mini, taas oo ah koorso bilaash ah oo nafaqada ah oo lagu bixiyo dhammaan internetka. Waxaa ka mid ah nafaqada 15 iyo mawduucyada caafimaad ee loogu talagalay dadka loogu talagalay dhagaystayaasha akhriska-hooseeya ee leh xirfadaha bilowga ah ee kombiyuutarka. Koorsada waxaa lagu helayaa Ingiriisi iyo Isbaanish.
Cinnamon-Orange Dajiska Barafka Cagaaran
Baradho cusub oo caafimaad qaba leh glaze macaan
Xilliga Xilliga Guga
Carruurtu way jecel yihiin faafitaankaas - u ogolow in ay sameeyaan qaar ka mid ah qiyaasta, xoqidda iyo qasitaanka!
Dub Bean iyo Corn Pitas
Tani macmacaan oo kululayn doona oo gurigaaga ka dhigi doona wax cadaan ah!
Rice Pilaf iyo Salmon
Iska wareeji oo siiso subag qaboojiyaha subaxdii caafimaad qabta!
Baradhada Baradhada Dhiiga (Chipotle Potato)
Cuntadani waxay u fiican tahay quraacda, cashada, ama ururinta qoyska.
Salad Khudaarta leh dharka Tangy Avocado
Cuntadani waxay isticmaashaa avocado si ay u sameeyaan shukulaato, dhar caafimaad leh oo dhadhan fiican leh.
Saddex Walxaha Salad ah
"Saddexda gabdhood" waa hadhuudh, digir, iyo squash (sida zucchini). Dadka Maraykanka ah ayaa iyaga beerta ku wada beeray beerta, sababtoo ah waxay is caawiyaan midba midka kale. "Saddexda gabdhood" sidoo kale waxay wada shaqeeyaan si ay jidhkaaga u siiyaan cunto nafaqo leh.
Veggie Quesadillas leh Cilantro Yogurt Dip
Khudradda iyo Tofu Stir-Fry
Tani walaaq-shiil waa midab, dhadhan leh iyo lagu dhajiyay nafaqooyinka. Tofu waa borotiin kale oo weyn kaas oo ah isha weyn ee kalsiyum iyo fiitamiin E.
Dharka Dufanka Oraanta ah
Cuntadan kuleylka ah ee loo yaqaan 'tropical-inspired' ayaa si tartiib ah loogu iibiyaa dhadhan qani ah.
Cunista cunnadu waa il heer sare ah oo fitamiin C iyo manganese. Isku day dufankaan adigoo ku dhajiya antioxidant farsamadan.
Maraqkani wuxuu dhadhamiyaa sida wanaagsan ama ka fiican maalinta xigta. Waa shey qumman oo la isku qurxiyo.
Dirty Rice iyo Blackeye Peas
Cajun oo bariis ah iyo kaluun
Basbaaska Chili iyo suugada taco ayaa siinaya bambaanadan bareer ah.
Iska tuur bacda yar ee qasacadeysan bacdaada ka hor inta aadan guriga ka tegin si aad u heshid wax caafimaad leh oo aad cuni kartid maalintii.
Black Bean Browns
Morocan Salad Salad
Saladkan saliidda ah waxaa lagu buuxiyaa fitamiin A, oo indhahaaga ku ilaalinaya caafimaad.
Madow-duban iyo Okra
Cuntadani waxay noqon doontaa hab weyn oo aad ku beddesho cuntadaada iyo ballaarinta raashinkaaga cuntada.
Qaboojiyaha Cajiibka Cuntada
Cuntadu waxay leedahay qiimo nafaqo oo sare ah oo qof kastaa uu ka faa'iideysan karo adigoo ku daraya legume caafimaad leh cuntadooda.
Chips chips waa cunto caafimaad leh oo qancisa.
Raw Zucchini Palleton oo leh Parmesan
Isku day inaadan ku ridin baastada iyo isticmaali raajiciyada zucchini.
Cunto qudaar ah
Halkan waa hab cusub oo cusub oo loo isticmaalo khudaarta xagaaga.
Isticmaalka qajaarka halkii rooti ama qashin-qaadidu waxay ka dhigtaa midkani raashinka cusub iyo doorasho weyn oo bilo-bilo ah.
Quraacadani sahlan iyo nafaqo leh waxay u noqoneysaa aag qoyskaaga.
Ukun leh Nopales
Avocado, Rice, iyo Beans
Laabashadu waxay ku badan yihiin borotiinka iyo dhadhanka jilicsan ee ka sameysan digirta. Ku hayso qaboojiyaha qaboojiyaha illaa maalmaha 3.